Fomba hanatsarana haingana ny fanoratana ny antontan-taratasinao, discovery Antidote rindrambaiko.
Môdely mailaka manambara ny fandraisanao anjara amin'ny fivoriana...
Famoronana mailaka ho an'ny fangatahana fialan-tsasatra
Inona ny paikady hahazoana fisondrotana amin'ny 2022?
Posted by Tranquillus | Sep 26, 2018 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Antidote: inona izany?
Antidote dia rindrambaiko feno ho an'ny fanitsiana ny hadisoana rehetra sy ny famaritana diso. Ity fitaovana mahery vaika ity dia ahafahana mamory mpanao didy amam-pitsipika ho amin'ny teny Frantsay sy Anglisy, rakibolana manontolo, mpitarika ny fiteny sy prisma ho an'ny fanavaozana sy ny fanaraha-maso. Izany rehetra izany dia ahafahana manitsy fanitsiana henjana amin'ny asa soratrareo rehefa mamonjy fotoana, satria ny fanovana dia tena haingana.
Iza no miresaka aminy? Na olona na matihanina. Raha ny marina, ity rindrambaiko ity dia ampiasain'ny besinimaro ary ankafizin'ny matihanina izay manangona fotoana be dia be ho an'ny fanitsiana ny asa sorany. Antidote dia mametraka mora foana ny tenany ambonin'ireo mpifaninana aminy, satria feno amin'ny teboka rehetra ahitsiny (fitsipi-pitenenana, tsipelina, sns.) Izay tsy misy ireo fitaovana hafa amin'ny varotra matetika.
Amin'ny lafiny iray, ity Word plug-in ity dia miasa amin'ny Internet ihany koa, ho an'ny mpanoratra tranonkala na bilaogera mahay, izay mitady hitsitsy fotoana sy hanafohezana ny fotoana fanitsiana, na hanaisotra ny fanitsiana mihitsy aza raha tsy mila lahatsoratra akademika ianao.
Antidote, tena ilaina ve izany?
Ny fampiasana rindrambaiko fanoratana fitenenana momba ny fampiasana matihanina dia mety ho toa tsy mety ary manelingelina mihitsy aza amin'ny mpanoratra mpanoratra na mpanao gazety za-draharaha.
Noho izany, mety hieritreritra isika fa ny Antidote dia mahaliana fotsiny ho an'ny olona manana olana ara-pôlitika sy antonontonony sasany, na ho an'ny olona tsy teratany ohatra.
Raha ny marina, ity rindrambaiko Kanadiana ity dia mahomby tanteraka amin'izany ary afaka mamonjy mora foana. Mihamaro hatrany ny orinasa sy ny manampahefana ao an-toerana mampiasa io serivisy io ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra ambony.
Amin'izany heviny izany, ny Antidote dia tonga lafatra ho an'ireo matihanina izay tsy mahazo aina amin'ny fiteny Molière amin'ny ambaratonga voasoratra, ary maniry ny hanolotra hatrany ny votoatiny tsara, hanangana teny, hanoratra mailaka na taratasy ohatra.
HAMAKY Ny tatitra: 4 zava-dehibe tokony ho fantatra mba hahomby
Fa avy eo… Ahoana no ampiasan'ny tonian-dahatsoratry Antidote?
Na dia mazava aza fa ny rindrambaiko dia tsy voatery ho tena ilaina amin'ny fanitsiana izay tsy misy tsipelina sy hadisoana amin'ny fiteny, dia eo amin'ny ambaratonga ny sintona sy ny mari-piatoana no mahagagagaga ity fitaovana ity!
Ny habaka aorian'ny ":", faingo, kapitaly ary teboka syntactic hafa dia sarotra ny hifehy 100%, eny fa na dia ho an'ny matihanina amin'ny sehatra iray aza ary matetika tsy avela mandritra ny dingana voalohany amin'ny fanoratana. Sarotra tokoa ny fifantohana amin'ny lohahevitra sy ny mari-piatoana rehefa manoratra lahatsoratra ohatra ary mampiadana ny fanoratana.
Ary farany, Antidote dia mijanona ho fitaovana fanabeazana tena izy, mifanaraka tsara amin'ny mpianatra na amin'ny matihanina vaovao mitady hampivelatra ny fahaizany. Ny rindrambaiko dia tsy mianina amin'ny fanitsiana ny lesoka fotsiny; ny naoty info dia hiposaka isaky ny lesoka hanazava aminao hoe avy aiza izany hadisoana izany, mba tsy hanao fahadisoana mitovy fanindroany. Ity fomba ity dia mamela anao hanatsara ny haavon'ny fiteninao rehefa mandeha ny fotoana, miaraka amin'ny tranga tena izy.
Fitaovana amin'ny fiteny roa amin'ny fanompoana ny rehetra
Amin'ny maha-fitaovana fandikan-tserasera Kanadiana, tsy sarotra ny mahatakatra fa Antidote dia fitaovana iray miasa amin'ny teny Frantsay sy Anglisy ary hahafahanao misoroka ny fahaverezan'ny ora ao anatin'ny fehin-teny raha manoratra amin'ny fiteny ianao. fiteny izay tsy mahay mamaky fahalavorariana toy ny Anglisy; na hampivoatra ny fahaizanao amin'ny fiteny iray tahaka ny hoe raha nampiasa azy tamin'ny teny frantsay ianao mba hanatsarana ny haavon'ny frantsay.
Ity rindrambaiko ity dia manana tombony lehibe ihany koa, matanjaka izy hahafantarana ny fiteny ampiasaina amin'ny lahatsoratra na amin'ny fomba fiteny, indraindray tsara kokoa noho ny Word mihitsy! Ity fampiasa ity, izay toa tsy mampidi-doza, dia tena ilaina tokoa: ny lesoka amin'ny fahazoana ilay fiteny dia mety ho olana be. Eny tokoa, ny teny anglisy sasany ao anaty lahatsoratra frantsay dia mety hafangaro ary hadika ho azy raha tsy mitandrina sy mifanohitra amin'izay ianao, ny fomba fiteny frantsay ampiasaina amin'ny teny anglisy toy ny "déjà vu" ohatra dia mety hanakorontana rindrambaiko tsy dia tsara noforonina.
HAMAKY Ny drafitra amin'ny fanoratana mailaka mahomby
Zava-kendreny tsy azo ivalozana ho an'ny mpanoratra sy mpanoratra kopia rehetra
Raha misy karazana orinasa iray izay tena tokony hahazo rindrambaiko ho fanafody, dia masoivoho mpamoaka lahatsoratra sy masoivoho fanoratana kopia tokoa izany!
Amin'ny ankapobeny, matetika ireo mpiasam-panjakana no milefitra betsaka amin'ny asa be dia be, ny fampiasana rindrambaiko fanaraha-maso toy ny Antidote dia hamela anao hampihena ny asa fanarenana mandritra ny minitra fa tsy ora.
Amin'ny maha-tetikasam-pitaovana an-tranokala anao, ny fanamoriana ny ekipa Antidote dia ahafahanao mamela ny sambon-taonam-pamokarana, izay fotoana tsy dia ilaina loatra.
Maro amin'ireo matihanina no mandalo ity rindrambaiko fanitsiana ity mba hanokana fotoana bebe kokoa amin'ny asa fanoratana, ohatra. Noho izany dia zava-dehibe ny miara-miasa amin'ity karazana rindrambaiko ity mba hahazoana vokatra mahomby sy vokatra bebe kokoa, saingy ara-dalàna ihany koa ny manontany tena raha ny Antidote no vahaolana mety amin'ireo rindrambaiko fanitsiana rehetra misy.
Antidote, fitaovana fanitsiana mahomby indrindra?
Rehefa miresaka momba ny fanamarinana famaritana isika dia tsy voatery hieritreritra ny Antidote amin'ny vahaolana voalohan'ny Frantsay sy ny Frantsay fa matetika no miharihary.
Ny Robert Correcteur na ny ProLexis kely dia mbola references izay tian'ny mpampiasa maro ankasitrahana, saingy tsy voatery ho safidy tsara izany.
Raha ny marina, raha toa ka tena mahery vaika ireo rindrambaiko 2 ireo, dia mahantra tokoa ny ergonomics, mandidy azy ireo amin'ny andraikitry ny tsipelin-tsoratra tsotra, toy ny site maro amin'ny karazana Bonpatron.
HAMAKY Modely mailaka miala tsiny amin'ny mpiara-miasa
Raha toa ka tsy maintsy roa monja amin'ny fanitsiana mahomby ao amin'ny tsena isika dia tsy maintsy hisy ny tena fanontaniana marina eo amin'ny Antidote 9 sy Cordial Pro. Izy ireo dia rindrambaiko tsara kalitao, saingy indrisy fa tsy mitovy ny ilk, ka mamela ny Cordial Pro lavitra aorian'ny Antidote 9.
Ankoatra ny vidiny, ny tsy fisian'ny Cordial Pro amin'ny Antiidote dia mety ho voavolavola amin'ny hoe fa miasa amin'ny teny Frantsay ihany izy io, tsy toy ny Antidote izay hany fitaovana amin'ny fiteny roa amin'ny tsena.
Raha ianao ilay karazana miasa amin'ny fiteny roa dia tsy tonga akory ny fanontaniana!
Teboka iray hafa, ny fanitsiana dia tena mendrika kokoa amin'ny Antidote, satria manohana azy roa sy ny singiolary ary manolotra anao hisafidy eo amin'ny roa rehefa tsy mazava ny fehezanteny. Ny Cordial Pro eo anilany dia tsy afaka hikarakara afa-tsy ny singa manokana raha sendra sahiran-tsaina.
Farany, ny teboka farany fa tsy ny kely indrindra, Cordial Pro dia somary lafo kokoa noho ny mpifaninana aminy, 199 € eo ho eo; izany dia toa lafo loatra raha oharina amin'ny Antidote!
Antidote, rindrambaiko mahomby eny, fa amin'ny vidiny inona?
Rehefa avy namaky izany dia toa mazava tsara fa Antidote no rindrambaiko tena ilaina ho an'ny matihanina rehetra sy izay mitady hamokatra soratra madio sy voalamina tsara. Saingy misy fanontaniana tena manan-danja mipoitra, ohatrinona ny vidin'ny rindrambaiko qualitative toy izany?
Ny dikan-teny farany amin'ny rindrambaiko dia eo amin'ny 100 euros eo ho eo; Ka noho izany dia avo roa heny noho ny mpifaninana mivantana amin'ny endrika marobe ...
Noho izany, amin'ity vidiny ity, maninona no tsy mandeha?
Fomba hanatsarana haingana ny fanoratana ny antontan-taratasinao, discovery Antidote rindrambaiko. November 21st, 2018Tranquillus
Teo alohaNy fanakianana mendri-piderana dia mamoaka izany, mandray izany.
manarakaAhoana ny fomba hiverenanao ny antony manosika anao aorian'ny fotoan-tsarotra?
Modely taratasy hangataka mialoha na hametraka
Taratasy santionany hiadiana amin'ny garnishment karama
Faran'ny mailaka, ny fomba fahalalam-pomba hialana
Safidio ny farany faran'ny fehezanteny mailaka, fa ahoana no fomba hanaovanao izany?